Jirid Af: Waxaanu ku fikirnaa inaanu nahay daa’injir
Waxaanu ku fikirnaa inaanu nahay daa’injir
Qoraa: Sónia Bettencourt
“(…) Qoritaanku wuxuu u rogmaa xididmaskaxeedkac run ah.
Isagaa qaadtay kobta Eebe aanu kaga baxinay si uu abadba dib u soo laabanin (…)”
Jean-Paul Sartre (Tarjamid iyo fasiraad aan ku xadgudbin Islaamka)
Qalfoof iyo Harkiisa
Dadku waxay ka soo baxaan baska kuna kala firaraan jidka. Sadex saac. "Sadex saac had iyo jeer waa u daah ama u dagdag waxa aanu doonno inaanu sameeyno", waxaan ka aqriyay meel uun. Waa saacadda aanu dheefshiidno caloosha oo maran.
Qorax qabaw baa iga jarceeysa tan iyo lafaha. Iftiinka tabaryar baa igu kaciya madax-xanuun. Laqanyo, baan dhahi lehaa.
Waxaan kula abaaraa guriga talaabooyin dhaadheer, ee dhabe cariirsan oo maran, sidii anigoo qof i sugaya. Waan jacelaan lehaa haysasho qof i suga. Waan ka qaatiyaa markii ugu horeeyo naqosho kali.
Wadnaha baa jug igaga siiya mabsuudnimo markaan arko hooygayga yar: iska caadisan, iska dagan, ku dhax-xaseeysan miyiga. Muulku waa shibta. Waxay na siisaa habeeno si fiican loo seexday. Hase yeesho, hurdadaydu dib bay u dhacdaa. Habeen si fiican loo seexday baa ku filnaan lehaa inuu ka nadiifiyo madaxayga dhacdooyinkayga dhan. Dib uguma joogi karo kali dhaxda codadkaas faraxsan, uma arki karo shakhsiyo qoslaya, ku fikiraya wadajir kuna qiranaya raalli inay wada leeyahiin isla ra’yi. Caku, hilaac kala gooy!
Waxaan qoraa toban, shan iyo toban bog hal habeen oo marnaba ma aan sheego runta. Waan isku caroodaa. "Sidee u suurtawdaa inaad been sheegto runta oo ku jirta gacanta?", ayaan u sheegaa naftayda.
Waxaan eegaa galaas biir ee maalintii tagtay, saaran miis-qoraalka. Waxaan damacsadaa iraahid: "Ma aan qorayo inkale!".
Ma dhaci doontaa inaan ku hayn karo kalinimada xasiloon meeshayd?
Intaan sii gaboobayo waxaan dareemaa baahi marwalba sii xoogan ee buug qorid. Tani lama tijaabinin. Laakiin waa fiiro iigaga timaada si aan u mideeyo su’aalahayga, rajobeelkayga iyo walbahaarkayga.
Waxaan jacelahay dhabaqtirid-la’aan qorid, ee mar kaliya. Laakiin waxaan dheelitirka iskaga waayaa si fudud. Waxaan ka dareensadaa dangaraaro koridda kursiga, horjeedkayga oo dibmarsan, ku sakhraansan biirka iyo fikradahayga. Marar badan waxaan kaga soo joogsadaa caadifad-ahaanba anigoo daalan leh dareen kadis ah ee xornimo oo waxaan u cararaa god cad oo aan ku leeyahay darbiga. Muraayadda.
Wajigayga. Waan fiiriyaa. Ma aan fahmo. Wajiyada dadka saarnaa baska waxay lehaayayn macne, kayga maya. Waxaan rabaa go’aansashada haddii aan u arko qurux ama foolxun. Dabadeed baan sameeyaa waji-majuujis, ilig baan soo taagaa, maqaarka midabka fasakhan baan duubduubaa, indhaha baan u kala balaqaa si adag, isdhaafdhaafis baan kula marmaraa timaha midabka qaxweed… shakigayga ma kala cadeeysmo. Sodan jir, baan is iraahdaa. Maxaa lambar ahaaw aadba u kooban, aadba uga fog aadbana ugu dhaw dhamaadka.
Waxaan ka dhaxdaawadaa muraayadda wixii iga xiga gadaal: miisas, kuraas, buugaag, Cd-yo, galaasyo wasakheeysan, qarshooyin ee biirka, haashash ku hilan sigaarsaaryada, koobab qaxweed… (dareengalmeed-kaciyayaal oo hadda saameeys yarba igu leeyahiin), miis-qoraal rasan, waraaqo ku hilan… Kamadanbeeysba, guri ku wada daboolan bus iyo xididmaskaxeedkac.
Waxaan ka soo qaadaa muraayadda waji aan u ekaanin banii’aadan oo waxaan ku soo naqdaa kursiga ufooyinka maskaxeed, inta habeenku igu neefsanayo oo igu dhaxduubayo sirtiisa. Shaydaanka baa ku nool gees. Farma’ba waan hakadaa oo, isla waqtiga kabada biirka ugu danbeeysa ii qoyso gudahayga, waxaan arkaa weer ka timaada halkaas sare oo waan soo jilaabaa: "waxaanu ku fikirnaa inaanu nahay daa’injir".
Waxaan ku dhacadiidsaday kursiga oo waxaan ugu dhaxsiibtay si nugul badan salka fikirka, anigoo la buuxa oon iyo waswaasyo: Sidee ayaananin loogu sii gudogalin riyada? Sidee ayaananin laysaga mamnuucin jiritaanka? Sidee ayaananin loo qaadin balano? Sidee ayaananin loo aadin waa dhamaaday? Sidee ayaananin loogu dhaafin fadalo bacaadka?
Sidee ayaananin dib laysugu reebin bohalyaw? Sidee ayaananin laysugu abuurin meehaalo?
Sidee ayaananin loola sheekeeysanin magalootiyo hadla? Sidee ayaananin loogu baxnaanismarin dhabyaalka dunida dhan? Sidee ayaananin loogu dhacin khiyaano?
Sidee ayaananin looga qaadin kalsoonibeel dabeecadda bani’aadanka? Sidee ayaananin laysugu qasmin? Sidee ayaananin loogu dhaqaaqin buug qorid? Sidee ayaananin looga wabxin marnaanta? Sidee ayaananin laysugu kala daadanin sharqan la’aan? Sidee ayaananin loogu qaylinin shib-ahaan?
Biirka oo dhamaaday, baan arkaa. Waxaanna u baxaa soo iibsashaddiisa.
Qoraxdu waa qabaw. Maalin kale ee maalmaha.
Waxaan galay baska oo waxaan bilyeetiga ugu gooystay meelwalba iyo meelna, sahal-ahaanba raacayo nolasha banaanka, taariikhda sacodta, igu hareersan dad leh wajiyo ku iltiran macne, inkastoo qaar yahay camoole, inkastoo qaar kale yahay dhagoole, gadi kula baxnaanismaraya si hor leh muqaamarad. Wada xasiloon. Haddayto, waan karaahiyeeystaa iyaga, ma aqaani waayo.
Waxay u egtahay in waxna dhacin goorta la nool yahay. Dadku waxay kaga galoobaxaan amin la baxnaanismaray sidii isagoo ku saabsanaa bas – kuwo dadajisan, saaxi ah uu la jiro dheeldheeliga.
Sidii iyagoo ahaa daa’injir.
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 22:37
Labo Jacayl (Isujinsigalmood)